Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » नयाँ पुस्ताको युनियन आन्दोलनः श्रमशक्तिको विकासको अवको योजना
नयाँ पुस्ताको युनियन आन्दोलनः श्रमशक्तिको विकासको अवको योजना
धेरैलाई लागेको हुनसक्छ– समाज पूर्ण पूँजीवादी नहुँदा पूंजीपतिहरुलाई सहुलियत दिईनु पर्छ। यसले उनीहरुमा लागानीको उत्प्रेरणा जगाउंछ । र, सायद यस्तो सोच्नेले ठान्छन्, त्यो सहुलियत श्रमिकहरुको गांस काटेर मात्रै संभव छ !
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको दोस्रो संस्करण शुरुवात भएको करिब ३५ वर्ष भएको छ। जिफन्टको स्थापना भएको पनि २४ वर्ष नाघि सकेको छ । संगठित उद्योगदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकसम्मलाई संगठित गर्ने क्रममा विभिन्न विधिहरु प्रयोग भएका छन् । २०३६ सलादेखि २०४६ सम्मको एक दशकसम्म हामीले औपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित कलकारखाना र सेवा उद्योगका श्रमिकहरुलाई युनियनमा समेट्न “अर्गनाईजिङ्ग–मोडल” को विधि अपनायौं । “अर्गनाईजिङ्ग–मोडल” भनेको ‘आप्mनो मानो खाएर, आफ्नोलागि युनियन बनाउने” विधि हो, जुन आदर्श त्यतिखेरका साथीहरुले बोक्नु भएको थियो । जो, जो ‘पेशेवर युनियन संगठक’ बन्नु भयो उहाँहरु समेत श्रमिकहरु कै भरपोषणमा क्रियाशील हुनुभयो । जिफन्टको स्थापना पछि २०४६ साल यता श्रमशक्ति विकासकालागि “अर्गनाईजिङ्ग” सहित विभिन्न विधि र माध्यमहरु प्रयोग भएका छन् ।
अवधिको मूल्याङ्कनगर्दा जिफन्ट आन्दोलन भित्र अहिले तीन पुस्ताका युनियनकर्मीहरु हुनुहुन्छ । ठूलो संख्यामा युवा र चलायमान श्रमिकहरु मातहतमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ, मूख्य जिम्मेवारीमा उमेरका हिसावले वयस्क, स्थिर तर क्रियाशील कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । र, वरीपरी सेवा निवृत्त भएका वा सेवा निवृत्त हुने दिशातर्फ उन्मुख बरिष्ठ युनियनकर्मीहरु हुनुहुन्छ । २०४६ र २०५७ सालपछि क्रमशः गरिएका १०÷१० वर्षे योजना कै आधारमा हाम्रो आन्दोलन आजको उचाईमा पुगेको हो । अव हामी आउंदो दशकको लागि योजना निर्माणको मोडमा आई पुगेका छौं। अर्को दशकको योजना गर्ने भनेको आउंदो दशकका लागि युनियन आन्दोलनको लागि आवस्यक पर्ने नीति, विधि, संरचना र प्रतिवद्ध नेतृत्व पङ्ती तयार गर्नु हो । निःसन्देह यसकालागि हाम्रो महासंघ–परिवारलाई आवस्यक पर्ने, नियमित तर ठोस र सघन प्रशिक्षणको विस्तृत गृहकार्य आवस्यक छ ।
गतसाल परिचालन गरिएको ‘तत्काल कार्यसम्पदान टोली’को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने देशभरीमा जिफन्टका हजारभन्दा बढी स्थानीय कमिटीहरु अस्तित्वमा छन् । यिनीहरुलाई पनि नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय–अञ्चल र जिल्ला संरचनाहरु छन् । यिनै कमिटीहरुमा आवद्ध कमरेडहरुमा नै जिफन्टको वर्तमान नेतृत्वमा रहेका अघिल्लो पुस्ताले आप्mनो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने हो । हामीलाई थाहा छ, नेतृत्व निर्माण भनेको हाटहुटमा हुने कुरा होईन । विभिन्न विषय र विधामा जानकार व्यक्तिहरुको टिम निर्माण गर्नु भनेको बाट नै नेतृत्वको निर्माण गर्नु हो ।
अघिल्लो दुई दशकमा आमसभामा दिइने भाषण हु“दै निश्चित पाठ्यक्रम रहेको ९ महिने ट्रेड युनियन स्कूलबाट ‘सिकाई’को प्रकृयालाई निरन्तरता दिईएको थियो । ट्रयु–क्याम्पेन नाम दिइएको त्यो अभियान अन्तरगत मोवाइल ट्रेड युनियन स्कूल हु“दै लेवोर युनिभर्सिटीको अवधारणा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । हाम्रा कतिपय योजनाहरुले उत्साहजनक परिणाम दिए, तर केही भने प्रचारमा मात्रै सीमित रहन पुगे । जिफन्ट श्रोत केन्द्र सञ्चालनदेखि राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान (ल्ीब्(ल्बतष्यलब िीबदयगच ब्अबमझथ) को स्थापनासम्म यही प्रकृयामा विकसित भएका हाम्रा संरचनाहरु हुन् ।
तर अहिले हामीसंग रहेको नेता–कार्यकर्ता पङ्तीलाई समयानुकल नेतृत्व गर्न सक्ने तुल्याउन विचार, सिद्धान्त, अर्थ–राजनीति र श्रम–सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा थप प्रशिक्षित गर्नु जरुरी देखिन्छ । श्रमशक्तिको विकासका लागि भिन्न–भिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका संरचना नै खडा गरी प्रयत्न गरिएको पाईन्छ । उनीहरुको यी अनुभवको कसीमा,“ट्रेड युनियन शिक्षा विभाग, केन्द्रीय योजना आयोग, राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान”जस्ता जिफन्टसंग रहेका विद्यमान संरचना अपेक्षा गरिएका आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त देखिन्छ ।
जस्तो की, विभिन्न युरोपेली देशहरुका ट्रेड युनियनहरुलेआप्mनै ट्रेड युनियन ईन्स्टिच्युट मार्फत प्रशिक्षण अभियान नै सञ्चालन गरिरेहका छन्, उनीहरुका आफ्नै ट्रेड युनियन स्कूलहरु छन् । कतिपय युनियन तथा ग्लोवल युनियन फेडेरेशनहरुले नियमित रुपमै वर्षको एक याममा ‘समर ट्रेड युनियन स्कूल’ सञ्चालन गरी सामूहिक रुपमा प्रशिक्षण दिने विधि समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अष्ट्रेलियाको ट्रेड युनियन– एसिटियुले त पृथक ढंग कै प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । ट्रेड युनियन ट्रेनिङ्ग अथोरिटी (टुटा) नामको संस्था खडा गरी आप्mनो देशको मात्रै नभएर विश्व कै युनियन आन्दोलनलाई लाभान्वित गराउने काम समेत गरेको थियो। वेलायतले विभिन्न क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरु संगै जोडेर अर्गनाईजिङ्ग एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेको छ । अमेरिकाको ट्रेड युनियन एएफएल–सिआईओ ले विगत २५ वर्ष देखि आफ्नै अर्गनाईजिङ्ग इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरिरहेको छ । हामी आफैं आवद्ध आइटियुसीले पनि गतवर्षबाट अर्गनाईजिङ्ग एकेडेमीको अवधारणा विकसित गरेको छ ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता थुप्रै अनुभव विश्व भरी नै छन् । हामीले यिनै अनुभवलाई ख्याल गर्दै आगामी कार्यकालबाट नया“ प्रयास थाल्नु आवस्यक छ ।
श्रमजीवी वर्गको २ वटा स्वार्थहरु छन्– हक सम्बन्धित र हीत सम्बन्धित । हक राजनीतिक विषय हो भने हित, संविधान–कानून– र संझौताबाट तय गरिने लाभ हो । ‘हक’लाई हामी समाजको रुपान्तरणसंग जोड्छौं, ‘हित’लाई श्रम लागानीबाट प्राप्त गरिने ज्याला–सुविधा जस्ता मर्यादित लाभसंग जोड्छौं । पहिलो विषय, ज्यालजीवीलाई राज्यको सम्मानित नागरिक बनाउने विषयसंग गा“सिन्छं, र दोस्रो चा“हि श्रम लगानी गरे वापत प्राप्त गरिने मुनाफासंग ।
यसको प्राप्तीको बाटोलाई हामी श्रमजीवी वर्गले ‘वर्गसंघर्ष’ नामाकरण गरेका छौं । हाम्रो समाज र अर्थ–राजनीतिको रुपान्तरण, वर्ग–संघर्षको माध्यमबाटै हुन्छ भन्नेमा हामी विस्वास गर्छौं। र, हामीले स्वीकारेको राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम अनुसार– वर्गसंघर्ष, शान्तिपूर्ण तथा बैधानिक बाटोबाट सञ्चालित हुन्छ ।
धेरैलाई लागेको हुनसक्छ– समाज पूर्ण पू“जीवादी नहु“दा पूंजीपतिहरुलाई सहुलियत दिईनु पर्छ। यसले उनीहरुमा लागानीको उत्प्रेरणा जगाउंछ । र, सायद यस्तो सोच्नेले ठान्छन्, त्यो सहुलियत श्रमिकहरुको गांस काटेर मात्रै संभव छ !
हाम्रो बुझाईमा आर्थिक गतिविधिमा लगानी एक पक्षले मात्रै गर्दैन । त्यहा“ दुई पक्ष हुन्छ– एउटा पक्षले भौतिक तथा मौद्रिक पू“जी लगानी गर्छ, अर्कोले जिवित श्रमशक्ति लगानी गर्छ π अघिल्लोले सारा सम्पत्ती लगानी गर्छ, पछिल्लोले सम्पूर्ण जीवन π लगानी गर्नेले तीन प्रकारको प्रत्याभुतिको माग गर्छ– प्रतिफल, दिगोपन र सुरक्षा π यो दुवै पक्षमा उत्ति कै लागु हुन्छ र हुनुपर्छ । अघिल्लोले प्रतिफलको रुपमा मुनाफा, दिगोपनको रुपमा लगानीको दीर्घ जीवन र सुरक्षा को रुपमा भौतिक सम्पत्तीको संरक्षणको प्रत्याभुति चाहन्छ । दोस्रोले प्रतिफलको रुपमा मर्यादित ज्याला–सुविधाहरु, दिगोपनको रुपमा रोजगारीको निरन्तरता र सुरक्षाको रुपमा मानवीय शक्तिको सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभुति खोज्छ । यी दुई पक्ष वर्गसंघर्षका पक्ष र विपक्ष हुन् । समाजको विकासको लागि यी दुई विपरित स्वार्थ वोकेका पक्षवीच संघर्ष– एकता– र संघर्ष चलिरहन्छ । एकको अस्तित्वमा अर्को को जीवन रहने हुनाले नै हामी यी दुई पक्ष वीच सह–अस्तित्व खोज्छौं । र दुई पक्ष वीचको द्वन्द्वलाई सामाजिक सम्बाद मार्फत वैधता दिन्छौं । सामाजिक सम्बाद भनेको दुई लगानीकर्ता वीच हुने सामुहिक सौदावाजी हो । तसर्थ सामुहिक सौदावाजीलाई हामी वर्गसंघर्षको वैधानिक र शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको माध्यम ठान्दछौं ।
हाम्रो यो लक्षलाई, हाम्रा प्रत्येक सदस्यले, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उस्तै जोड र कोणमा बुभ्mनु पर्छ । त्यसैले अवको योजना ‘सिक्ने र सिकाउने’ कार्यसंग जोडिनु पर्छ ।
अवको दशकको लागि प्रस्तावित नया“ योजनाका २ पक्ष हुनेछन् । पहिलो अनुसन्धान र नीति विश्लेषणसंग सम्बन्धित हुनेछ । सिक्ने–सिकाउने विधि, प्रकृया र संरचनाकोे विकास गरी ‘प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण, अनुसन्धान र परिचालन’ गरी ४ तहमा यो कार्यक्रम लागुगर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रशिक्षण– ठूलो संख्यामा युनियनकर्मीलाई प्रशिक्षित गर्न निमित ट्रेड युनियन स्कूल सञ्चालन गर्ने।यस्तो स्कूलमा एक दिन वा केही घण्टाको छोटा विषय आधारित अभिमुखिकरण देखि हप्ता लामो आवासीय प्रशिक्षण दिने । उदाहरणको लागि यदी १ हजार मातहतका कमिटीमा जिफन्ट प्रतिनिधि सहित सरदर ११ जना साथिहरु संगठित हुनुहुन्छ भने पहिलो चरणमा कमिटीमा संगठित एघारै हजार सदस्यलाई प्रशिक्षित गर्ने । एक–हप्ते कक्षामा, प्रत्येकमा ३० जना लाई संलग्न गर्दा सरदर ३६७ कक्षा हुनेछ । यदी एउटा कक्षा एक जोडी प्रशिक्षकले सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक जोडीलाई २ महिना कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिने हो भने ४६ जोडी प्रशिक्षकको आवस्यकता पर्छ । यो आवस्यकता विगतको दशकमा विकास गरिएका, पछिल्लो प्रशिक्षक सम्मेलनपछि छनौट गरिएका मूख्य प्रशिक्षकहरुबाट पुर्ताल गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई यसै वर्षको पुस महीनासम्ममा आवासीय तर प्रयोगात्मक पुनरताजगी तालिम दिई आउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने तुल्याउनु पर्छ ।
नीति विश्लेषण– नीति विश्लेषणको लागि महासंघ राष्ट्रिय कमिटीको मातहतमा जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसि ईन्स्टिच्युट (न्भ्ँइल्त्( त्ग्एक्ष्) स्थापना गर्ने । यो नै भावी दिनमा नीतिगत हिसावले जिफन्टले आड लाग्ने “थिंक ट्याङ्क विंग” हुनेछ, यसलाई राष्ट्रिय कमिटीले “सञ्चालन निर्देशिका” मार्फत सञ्चालन गर्नेछ । यसले श्रम र राजनीतिका विभिन्न पक्षमा उच्चतहका विज्ञहरुलाई सलग्न गरी समसामयीक नीतिगत विषयमा सामग्रिहरु तयार गरी राष्ट्रिय कमिटीलाई आवस्यक फिडव्याक दिनेछ ।
अनुसन्धान– राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानलाई सुदृढ गरी आवस्यक अनुसन्धानमूलक काममा सङ्लग्न गर्ने । यसको अनुसान्धानका आधारमा पोलिसी इन्स्टिच्युटले नीतिगत दस्तावेज विकास गर्ने ।
परिचालन– युनियनमा संगठित हुने सदस्यहरुको प्रतिशत बृद्धिका लागि संगठकहरुको फौज परिचालन नगर्ने हो भने आगामी दिनको चुनौती सामना गर्न कठीन देखिन्छ । यस्तो आवधिक अभियानबाट युनियन निर्माणमा “अर्गनाइजिङ्ग एकेडेमी” अवधारणलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ।
दोस्रो पक्षमा पहिलो पुस्ताका कार्यकारी भूमिकाबाट निवृत्त कमरेडहरुलाई संगठित गर्न व्यवस्था गरिएको वरिष्ट युनियनकर्मी सञ्जाल, सामुदायिक श्रमिक क्लवलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । वरिष्ट युनियनकर्मी सञ्जाल र सामुदायिक श्रमिक क्लवलाई जोड्ने कडीको रुपमा सहकारी कार्यक्रम शुरु गर्नु व्यवहारिक देखिन्छ । यद्यपी सहकारी सञ्चालन सम्बन्धि हाम्रा वितेका वर्षहरुका अनुभव उत्साहजनक छैनन्, तर यसैमा काम गर्ने गरी अनुभवी नेता–कार्यकर्ताको पङ्ती विन्यास गर्दा अपेक्षित नतीजा आउने आसा गर्न सकिन्छ । यसलाई सुत्रमा “वक–अप कार्यक्रम” या “भिसीसी एसः भेट्रान– क्लव– र कोअपरेटिभ स्कीम” नाम पनि दिन सकिन्छ । यो छुट्टै नया“ योजना नभएर, पा“चौ महाधिवेशनमा तय गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्रै हो । यसलाई जिफनटमा आवद्ध श्रमजीवी वर्गको “घर–दैलोदेखि घर–दैलोसम्म” को कार्यक्रमको रुपमा प्रचारित गर्न सकिन्छ ।
समन्वय गर्नुपर्ने केही पक्ष
आगामी दशकको कार्यक्रम तय गरिरह“दा विद्यमान संरचनासंग खप्टिने र दोहरिने केही पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । हाल हामीसंग रहेका संरचनाहरुलाई नया“ प्रस्ताव अनुरुप निम्नानुसार व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुन्छ –
ट्रेड युनियन शिक्षा विभाग– जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसी ईन्स्टिच्युटले तयार पारेका नीतिगत सामग्रिको आधारमा आवस्यक पाठ्यक्रम विकास गर्ने । प्रशिक्षकको व्यवस्थापन र विन्यास गर्ने, प्रस्तावित ट्रेड युनियन स्कूल सञ्चालन र समन्वय गर्ने ।
केन्द्रीय केन्द्रीय योजना आयोग– जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसि ईन्स्टिच्युटले यसले गर्ने र त्यो भन्दा बढी काम समेत गर्ने हु“दा यसको स्थापनापछि केन्द्रीय योजना आयोग खारेज गर्ने ।
राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान– कार्यमूलक र नीतिगत विषयको अनुसन्धानमा यसलाई सङ्लग्न गराउने । यसलाई न्भ्ँइल्त्(त्ग्एक्ष् को कामको आधार बनाउने । जिफन्ट स्रोत केन्द्र र एनएलएको पुस्ताकालय एकै ठाँउमा गाभी प्रतिष्ठान कै भवनबाट सञ्चालन गर्ने ।
अर्गनाइजिङ्ग एकेडेमी– यो संरचना नभएर अवधारणा हो । तसर्थ यसमा ट्रेड युनियन स्कूलद्वारा दिक्षित संगठकलाई अभियानकर्ताको रुपमा संगठन कार्यमा परिचालन गर्ने । यसको समन्वय युनियन परिषद र जिफन्ट अञ्चल तथा मातहतका जिल्ला कमिटीको सहयोगमा हालको श्रम सम्बन्ध परिषदले गर्ने । परिचालनमा जिफन्ट युवा तथा महिला कमिटीलाई सङ्लग्न गर्ने ।
बरिष्ट युनियनकर्मी सञ्जाल– यसको व्यवस्था कार्यकारी पदबाट हटे पनि युनियन आन्दोलनमा जीवन पर्यन्त सङ्लग्न हुने वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको हो । बरिष्ट युनियनकर्मीहरु परिवारसंगै समुदायमा रहन्छ । त्यसैले ‘बक–अप’ कार्यक्रमको मूल समन्वयकर्ताको रुपमा यो सञ्जाललाई परिचालन गरिनुपर्छ । को हुन् बरिष्ठ भन्ने कुराको पनि मापदण्ड तय गरिनु पर्छ । प्रस्ताव कै रुपमा ५० वर्ष माथिका कम्तिमा डेढ दशक युनियन आन्दोलनमा संलग्न रहेका, महासंघ र यसका विभिन्न घटकहरुको केन्द्रीय तहमा कार्य गरिसकेकालाई लिन सकिन्छ ।
वरिष्ट कार्यकर्ताको प्राथमिक काम भनेको पदोन्नतीकोलागि युवा र मध्यम–उमेरका कार्यकर्ताहरुको खोजी गर्नु हो ।
–चिनियाँ नेता तङ् सियाओ पिङको
“यदी हामीले अव ३–५ वर्षको वीचमा उत्तराधिकारको समस्या राष्ट्रिय स्तरमा नै हल गर्न सकेनौं भने निसन्देह भद्रगोल शुरु हुनेछ । केही बरिष्टहरु हामी वीच नरहनु होला, केही जिवित रहे पनि काम गर्न नसक्ने हुनुहोला ।
… अहिले ४० माथिकाहरु ४७÷४८ वर्ष मा पुग्नेछौं । यो भनेको तन्नेरी पुस्ता होईन । जो अहिले नै ५० नाघेका छौं, ६० तिर उक्लिने छौं । मलाई डर लागि रहेछ, आज यहाँ उपस्थित कमरेडहरुमा केही मात्र अझै युवा छौं, अधिकाँस हामी ६० कै हाराहारीका छौं । आजबाट ७–८ वर्ष पछि के होला? हामीहरु सबै ७० को आसपास पुग्ने छौं । यो नै आज हामीले गंभीरता पूर्वक सोच्न पर्ने विषय हो…!”
( जुलाई २, १९८१ म प्रान्तीय पार्टी सचिवहरुको भेलामा दिईएको मन्तव्यबाट)